Amashalofu enkuni ahambisana nawo wonke amakamelo ekhaya lethu | Bezzia
USusana godoy | 02/06/2021 16:00 | Umhlobiso
Lapho sicabanga ngomhlobiso, kuyacaca ukuthi amashalofu ngokhuni Zingezinye zalezo zinketho okungafanele neze siziphuthe. Zidingeka impela hhayi ikamelo elilodwa kuphela ekhaya kepha ziningana. Siyithanda njengemininingwane yokuhlobisa kepha futhi njengeyunithi yokugcina.
Ngakho-ke, kuzohlala kukhona ehambelana nezidingo zethu kepha futhi negumbi ngalinye. Ngakho-ke, senza ukubuyekeza konke lokho okuzosikhipha ngokushesha futhi ngasikhathi sinye kuzohlanganisa wonke amakhona. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi kanjani uhlobise igumbi lakho ngalinye ngazo?
1 Amashalofu aphezulu wokhuni ukuhlobisa amakamelo okuhlala
2 Amashalofu enkuni etafuleni noma ezindaweni zehhovisi
3 Izikwele eziphansi zamakamelo ezingane
4 Amashalofu aphelele ekamelweni lokulala
5 I-Shelving ngaphandle kwesihlukanisi sesikhala ngezansi
Amashalofu aphezulu wokhuni ukuhlobisa amakamelo okuhlala
Mhlawumbe egumbini lokuphumula sifuna ukubona ukuthi i- amashalofu amade futhi amancane ahlala endaweni enkulu. Kuyiqiniso ngakolunye uhlangothi, ukuze ukwazi ukubeka izincwadi, ungahlala ubheja emibhoshongweni emide nemincane. Kepha siyazi futhi ukuthi ukwakheka kwe-modular kungenye yemibono emihle. Lokhu ukuthi singabeka lawa mashelufu amaningi, elinye eduze kwelinye. Ngakho-ke sizokwakha ukwakheka okuhle uma lokho kungukuthanda kwethu futhi uma isikhala sikuvumela. Kodwa-ke noma kungaba kanjani, yebo emakamelweni okuphila babheja kakhulu kulamashalofu njengemibhoshongo.
Amashalofu enkuni etafuleni noma ezindaweni zehhovisi
Kuyiqiniso ukuthi ayikho indlela ethile yokuhlobisa, ngoba ayinakuphela njengoba kukhona okuthandwayo. Kepha emahhovisi noma emakamelweni okufundela, singabheja emashalofini. Ngale ndlela, Sizobeka nezincwadi noma amafayela futhi azoqoqwa ngokwengeziwe njengoba etholakala ezindongeni. Ngabo sizokonga isikhala esiningi, ngoba ukusizakala ngezindonga kuhlale kungenye yezindlela ezingcono kakhulu esinazo.
Eduze kwamashalofu singakhetha futhi amashalofu ayisikwele angahlanganiswa eceleni kwezindonga ngezindlela ezingalingani. Ngakho-ke, sizokwakha umphumela wokuqala kakhulu ekuhlobiseni kwethu. Okuhle ngamashalofu enziwe ngokhuni nokubukeka kwawo ukuthi singawahlanganisa ngendlela esifuna ngayo size siwapende uma ubona kudingekile. Ngoba imibala nayo ingenye yaleyo mininingwane yokuhlobisa esiyidingayo njalo.
Izikwele eziphansi zamakamelo ezingane
Okwamakamelo okulala amancane kunayo yonke indlu, nathi siyakudinga uchungechunge lwamashalofu asisiza ukugcina wonke amathoyizi nezincwadi. Ngakho-ke, akukho lutho olufana nokubheja ezigcawini futhi. Lokhu kungatholakala ngemibala ehlukahlukene futhi bazobe bephelele kakhulu ukujabulela indawo ephilayo nenenjabulo ngokujwayelekile. Ngaphezu kwazo zonke izinhlobo esingazithola, kufanele kuthiwe siyayidinga ukuze ibe wukhuni olumelana nayo, ngoba sesivele sazi ukuthi asizifuni izingozi ezingenasidingo.
Amashalofu aphelele ekamelweni lokulala
Enye yezindawo eziyinhloko ikamelo lokulala. Ngakho-ke, sibadinga ukuhlangabezana nezidingo zale ndawo futhi ngaphezu kwakho konke, bazogxila engxenyeni yekhanda. Ngakho-ke lapha singathola amashalofu athile agcina okudingekayo njengamawashi we-alamu, izincwadi nezinye izinto zokuhlobisa. Kepha futhi kuyiqiniso ukuthi ungakhetha amashalofu okuma nawokumaphakathi, ngaso sonke isikhathi kuya ngesikhala onaso. Kungumqondo omuhle ukukwazi ukuthinta ngokudala ngenkathi uzama ukugcina konke okudingayo kuzo. Uma ungenasikhala, usuyazi vele ukuthi izindonga kusengabangani bethu abakhulu.
I-Shelving ngaphandle kwesihlukanisi sesikhala ngezansi
Lapho sifuna ukukhawulela izikhala, sinakho kulula kakhulu. Singabheja ngombono onjengalona ogxile ekujabuleleni ishelufu elingenaphansi, okusho ukuthi, elivulekile, futhi ulibeke hlukanisa womabili amagumbi okuhlala namakamelo okudlela nezindawo zokungena. Umqondo wokudala ozobe uphelele ukwazi ukujoyina zonke izitayela zokuhlobisa onazo engqondweni. Uyawathanda amashalofu enkuni? Ungazibeka kuphi?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Amashalofu enkuni ahambisana nawo wonke amagumbi asekhaya lakho